ဈေးတန်​ လုံးချင်း အငှါး
​ဈေးတန်​ လုံးချင်း အငှါး ​တောင်​ဥက္ကလာပမြို့နယ်​ ၆ရပ်​ကွက်​ အင်းဝလမ်းသွယ်​ ၄၀​ပေ ၆၀​ပေ ၂ထပ်​တိုက်​ 3Master Room 1Singel Room အသင့်​​နေပြင်​ဆင်​ပြီး တလ ၁၈သိန်း ဆက်​သွယ်​ရန်​ 09 777969010 09 788880510 သိူ့ဆက်​သွယ်​နိုင်​ပါတယ်​ ...
Marketed by Ko Htet အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် လုပ်ငန်း
【Corresponds to English and Myanmar】 🐚 မရမ်းကုန်း လုံးချင်း အငှား 🐚 ££ အိမ်လေးရဲ့ အားသာချက်က ..... ⏬ ♦️တိတ်ဆိတ်တယ် ♦️ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းတယ် ♦️အခန်းကျယ်ဝန်းတယ်....သပ်ရပ်တယ် ♦️မိသားစုပဲ နေနေ......ရုံးခန်းပဲ ...
ဘုရင့်​​နောင်​တာဝါ ​အငှား #​အကျယ်.........1600 sqf #အလွှာ.............3-rd floor #အိပ်ခန်းပါဝင်မှု....1-master,2-single #အခြားပါဝင်မှု.....,lift,carpacking,Ac,Settee,Dining ...
Marketed by Shwe Myanmar Property Real Estate
* ရန်​ကင်းမြို့နယ်​ (​ဘောက်​​ထော်​) ​​ရှိ ပြင်​ဆင်​ထား​သော (2)ထပ်​တိုက်​ ငှါးမည်​ *
* ရန်​ကင်းမြို့နယ်​ (​ဘောက်​​ထော်​) ​​ရှိ ပြင်​ဆင်​ထား​သော (2)ထပ်​တိုက်​ ငှါးမည်​ * #Code - HR #ရုးံခန်းဖွင့်​ရန်​နှင့်​ သင်​တန်း​ကျောင်းများဖွင့်​ရန်​သင့်​​တော်​# 💰💰တစ်​လငှါးရမ်းခ - 28 သိန်း (ညိုနှိုင်း) >> ​အနီဃာလမ်း >> ခြံအကျယ်​ ...
Marketed by Green Land Properties
* လှိုင်​မြို့နယ်​ Gems Garden Condominium ရှိ အဆင့်​မြင့်​ပြင်​ဆင်​ပြီး ပရိ​ဘောဂအစုံပါ​​သော အခန်း ငှါးမည်​ / ​ရောင်းမည်​ *
* လှိုင်​မြို့နယ်​ Gems Garden Condominium ရှိ အဆင့်​မြင့်​ပြင်​ဆင်​ပြီး ပရိ​ဘောဂအစုံပါ​​သော အခန်း ငှါးမည်​ / ​ရောင်းမည်​ * #Code - CR 💰💰တစ်​လငှါးရမ်းခ - USD 1500 (ညိုနှိုင်း) 💰💰​ရောင်း​ဈေး - 2400 သိန်း (ညိုနှိုင်း) >> သဇင်​လမ်း ...
* ဂိုဒေါင်အသစ်စက်စက်အမြန်ဌားမည် *
* ဂိုဒေါင်အသစ်စက်စက်အမြန်ဌားမည် * * R ( 144 ) * မန္တလေးမြို့ , ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် * ( ၆၂ ) လမ်းမကြီးအနီး , ( စံပြ x သခင်ဖိုးလှကြီး ) ကြား * ပေ ( ၁၂၀ x ၄၅ ) , ဂိုဒေါင်အသစ် * အနောက်လှည့် * တလဌားရမ်းခ - သိန်း ( ၂၀ ) ( ...
# ကနောင်လမ်းမကြီးတင်ဂိုဒေါင်အဌား #
# ကနောင်လမ်းမကြီးတင်ဂိုဒေါင်အဌား # # R ( 111 ) # မန္တလေးမြို့ , ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် # ကနောင်လမ်းမကြီးတင် , ( ၅၄ ) လမ်းအနီး # ပေ ( ၈၀ x ၁၂၀ ) , ဂိုဒေါင် # တောင်လှည့် # တလဌားရမ်းခ - ( ၂၅ ) သိန်း ( ညှိနှိုင်း ) ...
ရန်​​အောင်​၆ လမ်း ထိပ်​၊ ၂ရပ်​ကွက်​၊ ရန်​ကင်း၊ Golden City မျက်​​စောင်းထိုး၊ ၂ထပ်​မှာပါ (2nd Floor)။ အခန်း အကျယ်​ ၈၀၀ စတုရန်း​ပေ၊ ရန်​ကင်းတိုက်​ခန်း အဌားအပ်​လို့ရပါသလား။စုစု​ပေါင်း အခန်း ၃ခန်းပါပါတယ်​။ ​Refrigerator, washing machine, Instant Heater, Aircon (3nos), 5KVA Transformer, King Size 9inches thick mattress, Full height နံရံကပ်​ ဘီဒို များ၊ ဘုရားစင်​ ​တွေပါပါတယ်​။ တလ ၆သိန်း
ရန်​​အောင်​၆ လမ်း ထိပ်​၊ ၂ရပ်​ကွက်​၊ ရန်​ကင်း၊ Golden City မျက်​​စောင်းထိုး၊ ၂ထပ်​မှာပါ (2nd Floor)။ အခန်း အကျယ်​ ၈၀၀ စတုရန်း​ပေ၊ ရန်​ကင်းတိုက်​ခန်း အဌားအပ်​လို့ရပါသလား။စုစု​ပေါင်း အခန်း ၃ခန်းပါပါတယ်​။ ​Refrigerator, washing machine, ...
🎉🎉 Aung Chan Thar Condo For Rent In Yankin Township.,🎉🎉
🎉🎉 Aung Chan Thar Condo For Rent In Yankin Township.,🎉🎉 * Price - US 1000 * Living area : 1450 sqft * Includes; - 1 Master bedroom -2Normal bedrooms - (4) numbers of air-cons are already installed, Fully Furniture - (2) bathrooms - Parquet, ...
Well decorated condo unit for rent in Hlaing township
Well decorated condo unit for rent in Hlaing township . Close to Insein road,2bus stop far from GEMS condo . 1500 square footage in total . 1MBR(bathroom attached),(windows) . 2SBR (windows) . Polished parquet flooring . Living room . 4AC in ...
Check this url: https://www.lotayaproperty.com/property-for-rent?page=191